Nkọwapụta 10G Series | Ndị na-emepụta 10G China, ndị na-eweta ngwaahịa
Usoro 10G XFP nke modulu nyocha gụnyere Duplex / CWDM / DWDM / BIDI, nke na-akwado ụdị nnyefe dịgasị iche sitere na 300M ruo 80KM. Ha na-agbaso 10-Gigabit Ethernet, SONET OC-192 / SDH STM-64 na 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Mpaghara ngwa ngwa bụ netwọk CWDM / netwọk DWDM / SDH / SONET / FC nnyefe na gburugburu ndị ọzọ.
10Gb / s SFP + CWDM 1270nm ~ 1450nm 20km DDM DFB LC ngwa ngwa transceiver
Ezubere 10Gb / s SFP + CWDM usoro transpeiver optical maka ngwa ngwa nkwukọrịta eriri dị ka 10G Ethernet, nke na-agbaso nkọwa nke SFP + MSA SFF-8431.
Ezubere usoro a maka eriri otu ụdị ma na-arụ ọrụ n'ogologo ntụgharị nke CWDM.
10Gb / s SFP + CWDM 1270nm ~ 1610nm 10km DDM DFB LC ngwa ngwa transceiver
Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
10Gb / s SFP + CWDM 1470nm ~ 1610nm 40km DDM DFB LC ngwa ngwa transceiver
10Gb / s SFP + CWDM 1470nm ~ 1610nm 80km DDM DFB LC ngwa ngwa transceiver
10Gb / s SFP + SR 850nm 300m DDM VCSEL LC transceiver optical
Ezubere 10Gb / s SFP + SR iji mee ihe na njikọ 10-Gigabit Ethernet n'elu eriri multimode. Ha kwadoro SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-SR / SW na 10G Fiber Channel 1200-Mx-SN-I. A na-enweta ọrụ nyocha nchọpụta dijitalụ site na ntanetị ntanetị 2-waya, dịka akọwapụtara na SFF-8472.
10Gb / s SFP + LR 1310nm 10km DDM DFB LC Duplex ngwa anya transceiver
Ezubere 10Gb / s Enwetara obere ụdị ihe kpatara Plugable SFP + transceivers maka iji na 10-Gigabit Ethernet jikọtara ya ruo 10km karịa eriri Single Mode. Ha kwenyere na SFF-8431, SFF-8432 na IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, na ọrụ 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L dijitalụ nchọpụta dị site na ntanetị ntanetị 2-waya. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
10Gb / s SFP + LR 1310nm 20km DDM DFB LC Duplex ngwa anya transceiver
Ezubere maka 10Gb / s Enwetara obere ụdị ihe kpatara Plugable SFP + transceivers iji mee ihe na njikọ 10-Gigabit Ethernet ruo 20km karịa eriri Single Mode. Ha kwenyere na SFF-8431, SFF-8432 na IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, na ọrụ 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L dijitalụ nchọpụta dị site na ntanetị ntanetị 2-waya. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.